Basketball N1B lehilahy :: Lasan’ny ASB Itasy ny anaram-boninahitra • AoRaha
Basketball N1B lehilahy Lasan’ny ASB Itasy ny anaram-boninahitra
Voahosotra ho tompondakan’i Madagasikara 2019 eo amin’ny taranja basketball sokajy N1B lehilahy ny ASB (Itasy). Nazava ny vokatra teo amin’ny fifandonan’ny ASB sy ny USF tamin’ny lalao famaranana. Efa nitarika hatrany amin’ny tapany voalohan’ny lalao ireo mpilalao avy any Itasy. Nitarika 39 noho 25 ny ASB nanoloana ny USF (Matsiatra Ambony) teo amin’ny ampaham-potoana
faharoa. Nampiseho ny traikefany ny mpilalaon’ny ASB. Nibata ny fandresena tamin’ny isa mavesatra 72 noho 59 ireo mpilalaon’Itasy.
Ekipa telo no miakatra ao amin’ny sokajy N1A amin’ny taom-pilalaovana manaraka: ny ASB (Itasy), USF (Matsiatra Ambony) ary ny TMBB (Analamanga). Ity farany no nitazona ny laharana fahatelo rehefa nandavo ny MBC Atsinanana tamin’ny isa 54 noho 66.
Voahosotra ho mpilalao mendrika indrindra nandritra ny fifaninanana i Fandrama Benoit Narcisse laharana faha- dimy ambin’ny folon’ny ASB. I Tsilefitra Jernil Claud laharana fahasivin’ny MBC Atsinanana kosa no nahatafiditra baolina maro indrindra nandritra ny dingana famaranana (65 isa).
Baolina lavalava :: Mangataka ny hamerenana aminy ny kianjany ny RCTS Rugby Club Tanora Soavimasoandro
Atletisma – Fifaninam-pirenena :: Nandrombaka medaly betsaka indrindra ireo atletan’Atsimo Andrefana